ku xigeenlka maankii moon oo xamar tagay | ΚÜ šôõ ÐΗΔwΑΑw βìŸΔcΔÞ∑ ↓
ku xigeenlka maankii moon oo xamar tagay
October 26, 2013 · by biyacade	· in HOME.	·
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamud ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay Jan Eliasson, oo ah ku xigeenka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey, isagoo ku ammaanay booqashadan taariikhiga ah iyo furitaanka xafiiska cusub ee Qaramada Midoobey ay ka furaneyso Soomaaliya.
Shir Jaraa’id oo ay si wada jir ah u qabteen Madaxweynaha iyo Ku xigeenka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey ayaa waxay kaga hadleen kulankooda iyo waxyaabihii ay diirada ku saareen.
“Booqashadan maanta waa mid taariikhi ah oo caddeyneysa sida ay QM uga go’antahay garab istaagooda, waxaana maanta ku soo dhoweyney Muqdisho Jan Eliasson oo ah Ku xigeenka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey”ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh.
“Qaramada Midoobey waxey na tuseen sida ay noo taageersanyihiin oo ay weliba xafiis hor leh oo cusub ay ka furanayaan Muqdisho. Wadashaqeyn rasmi ah oo na dhexmarta Qaramada Midoobey waa muhiim oo noo sahleysa inaan sida wada jir ah u wada shaqeyno, tanoo kordhineysa xiriirka, gar-gaarka bani’aadanimo, go’aan gaarista iyo wada shaqeynta si hufnaan iyo furfurnaani ay ku jirto”ayuu sii raaciyay hadalkiisa.”
Sidoo kale waxey ka wada hadleen shirka Golaha Ammaanka ee QM oo dhowaan dhacaya loogana hadlayo sidii caalamku u taageeri lahaa Ciidanka Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM. Madaxweynaha ayaa yiri “Al-shabaab waa laga guuleystay, laakin weli ma aysan dhiman, Golaha Ammaanka ee QM waa inay caawinaan sidii ciidanka Soomaalida iyo kuwa AMISOM u heli lahaayeen tasiilaadkii lagu dhameystiri lahaa shaqada oo Al-Shabaab dalka looga sifeyn lahaa. Mustaqbalka Soomaaliya iyo xasilinta dalkaba waxey ku xiran yihiin sidii loo heli lahaa ciidan Soomaaliyeed oo tababaran isla markaana heysta dhaqaalihii ay ku howlgali lahaayeen.”
← Madaxweyne Xasan Sheekh “Cadawga wali waa nagu soo maqan yahay. hala feejignaado”
Weerar ka dhacay xadka Iran iyo Pakistan →